Malunga nathi - Hebei Chenli Rigging Group Co., Ltd.
I-Hebei Chenli Group Co., Ltd. (Iqela leChenli) elilawula iinkxaso-mali ezi-3 ezizezabanini ngokupheleleyo kunye neenkampani zesebe ezi-4 ezilawulwa ngezabelo, imi kwidolophu ekuphakanyiswa kuyo imveliso yeenqanawa kwiphondo laseHebei, eliliqela elikhulu elisebenza ngokukodwa ekuphandeni nasekuyileni irigging nokuphakamisa iimveliso. Uninzi lweenkcukacha ezingaphezu kwe-3000 ezichaziweyo ezahlukeneyo, imveliso kunye nokuhlangana komthamo kuye kwafikelela kwiiseti ezizizigidi ezisi-7 Amandla ethu apheleleyo ame phambi kwabakhuphisana nathi kwishishini lethu.
Iqela leChenli linobuchwephesha bemveliso ekumgangatho ophezulu kunye neqela lolawulo, Inkqubo yolawulo lweflethi yanamhlanje kunye nenkqubo yokusebenza kwenkqubo yetekhnoloji yokuvelisa, igqityiwe ngokusisiseko inguquko kulawulo lolawulo ukuya kulawulo lothintelo. Inkqubo yokusebenza esemgangathweni yabasebenzi kunye nomgangatho weemveliso usondele okanye udlule ku-4σ
Ukusukela ngo-2000, i-Chenli Group yamashishini axhobileyo nolawulo lwenzululwazi kunye netekhnoloji yesayensi. Inkampani yethu ityale i-RMB engamashumi amabini ezigidi, yakha iziko lokuvavanya umgangatho wenkampani. Kwishishini elinye kwangaphambili i-Chenli Group yadlulisa inkqubo esemgangathweni yokulawulwa komgangatho we-ISO9001 ngo-2005, imveliso yaphumelela i-CE yaseYurophu, umgangatho wemveliso yaseJamani kunye nesiqinisekiso sokhuseleko. Iqela le-Chenli ngokwahlukeneyo ngo-2008, ngo-2010, nangama-2012 lafumana "ikhonkco lokuphakamisa", "ukuphakamisa isilingi", "ukuphakamisa ibhokisi yokufaka isilingi" amalungelo awodwa omenzi wechiza amathathu,
Imotto yenkampani yeQela leChenli kukuba umthengi ulungile ngonaphakade. Imfezeko kunye nokugcina ukholo, ukwenza ishishini ngempumelelo, okwangoku i-Chenli Group yelizwe lethu ngaphezulu kwekhulu leqela leenkampani ezinkulu, iprojekthi yelizwe ephambili ibonelele ngeendlela ezikhuselekileyo nezinokuthenjwa ezahlukeneyo kunye nemigaqo yeemveliso. Iimveliso zisetyenziswa kakhulu koomatshini, isinyithi, amandla ombane, uloliwe, iiprojekthi zolondolozo lwamanzi, amazibuko, ukubhabha ngenqwelomoya, ezomkhosi, imoto, ipetroleum kunye nemizi-mveliso yamachiza njl.njl.Imveliso yeqela leChenli ithengiswa kumaphondo asekhaya angama-30, ezixekweni nakwimimandla eyi-100. Njengoko Middle East 、 i-European Union, mpuma Asia, North nase Mzantsi Melika njl zithunyelwa kumazwe angaphezu kwama-50 kunye nemimandla .Imveliso zamkelwa kakuhle kwaye zithembekile yi-customers.Under inkxaso yakho Chenli Group iye yaba ishishini ulawulo ezintsha kunye nobuchwepheshe I-Chenli Group iya kwenza abathengi be-brand ye-chenli babe nobutyebi ngonaphakade, iQela le-Chenli likulungele ukuma ecaleni kwakho.
Ukulawula ishishini kwinjongo
Umgangatho ophezulu, inqanaba eliphezulu, vumela abathengi bazive bekhuselekile ngakumbi, bethembeke ngakumbi, ngokulula ngakumbi!
Inkokeli yokulawula amashishini amatsha kunye nezinto ezintsha zethekhinoloji.Iqela laseChenli likulungele ukuhlala limi kuwe, liya kwenza abathengi beChenli ukuba babe nobutyebi ngonaphakade.
IQELA LEHEBEI CHENLI:
Ukusukela ngo-1991, kwiNkampani yeNtloko
Ukususela ngo-2005, Qing Yuan Inkampani
Ukususela ngo-2012, Boye Inkampani
Ukusukela ngo-2020, iNkampani yeJiangsu
IMVELISO ZE-CHENLI ZIGQIBELA LONKE IHLABATHI